January 2019 ~ Democracy and Human Rights Party
– ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေမဟုတ်ဘူးလို့ မြန်မာအစိုးရက ကြေငြာနေပေမယ့် ၁၉၇၈ ခုနှစ် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံတို့ရဲ့ လျှို့ဝှက်သဘောတူညီချက်မှာမြန်မာအစိုးရဟာ ရိုဟင်ဂျာတွေကို နိုင်ငံသား အဖြစ် တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုထားတယ်လို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် မီဒီယာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Dhaka Tribune က မနေ့မှာ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
၁၉၈၂ မြန်မာနိူင်ငံသား ဥပဒေမှ အခန်း(၄) နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူဖြစ်ခြင်း
၁၉၈၂ မြန်မာနိူင်ငံသား ဥပဒေပါ။မြန်မာနိူင်ငံသား တိုင်း လေ့လာထားသင့်ပါတယ်
(၄၂)၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်နေ့ မတိုင်မီကာလတွင် နိုင်ငံတော်အတွင်း၌ ရောက်ရှိနေ ထိုင်သူနှင့် ထိုသူတို့မှ နိုင်ငံတော်အတွင်း မွေးဖွားသည့် သားသမီးသည် ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသား ဖြစ်မှု အက်ဥပဒေအရ လျှောက်ထားရန် ကျန်ရှိနေကြောင်း ခိုင်လုံသော အထောက်အထားများဖြင့် ဗဟိုအဖွဲ့သို့ နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရရန် လျှောက်ထားနိုင်သည်။
(၄၃)ဤဥပဒေ အာဏာတည်သည့်နေ့မှစ၍ နိုင်ငံတော်အတွင်း၌ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံတော် ပြင်ပ၌ဖြစ်စေ၊ မွေးဖွားသည့် အောက်ပါသူတို့သည်လည်း နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရရန် လျှောက်ထားနိုင်သည် --
(က)နိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံခြားသား မိဘနှစ်ပါးမှ မွေးဖွားသူများ၊
(ခ)ဧည့်နိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူ မိဘနှစ်ပါးမှ မွေးဖွားသူများ၊
(ဂ)ဧည့်နိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံခြားသား မိဘနှစ်ပါးမှ မွေးဖွားသူများ၊
(ဃ)နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူ မိဘနှစ်ပါးမှ မွေးဖွားသူများ၊
(င)နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူနှင့် နိုင်ငံခြားသား မိဘနှစ်ပါးမှ မွေးဖွားသူများ၊
(၄၄)နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရရန် လျှောက်ထားသူသည် အောက်ပါအရည်အချင်းနှင့် ပြည်စုံရမည် --
(က)ပုဒ်မ ၄၂ သို့မဟုတ် ပုဒ်မ ၄၃ ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့် ကိုက်ညီသူဖြစ်ခြင်း၊
(ဂ)တိုင်းရင်းသား ဘာသာစကား တစ်မျိုးမျိုးကို ကောင်းမွန်စွာ ပြောတတ်ခြင်း၊။
(၄၅)နိုင်ငံသား သို့မဟုတ် ဧည့်နိုင်ငံသား သို့မဟုတ် နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူနှင့် အိမ်ထောင်ကျခဲ့သော ဤဥပဒေ အာဏာတည်သည့်နေ့ မတိုင်မီက နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ကိုင်ဆောင်သူသည် နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရရန် လျှောက်ထားလျှင် အောက်ပါအရည်အချင်းနှင့် ပြည့်စုံရမည် --
(င)တရားဝင်ဇနီး သို့မဟုတ် တရားဝင်ခင်ပွန်းအဖြစ် နိုင်ငံတော်အတွင်း
အနည်းဆုံး သုံးနှစ်အဆက်မပြတ် နေထိုင်ခဲ့ခြင်း၊
(၄၆)(က)နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူအဖြစ် ဗဟိုအဖွဲ့က သတ်မှတ်သူသည် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၏ သတ်မှတ် သည့် အဖွဲ့အစည်းရှေ့သို့ ကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီး နိုင်ငံတော်၏ သစ္စာကို ခံယူကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်၏ ဥပဒေများကို ရိုသေလိုက်နာမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ သတ်မှတ်ထားသော တာဝန်နှင့် အခွင့်အရေးများကို သိရှိကြောင်း စာဖြင့် ရေးသား၍ ကတိသစ္စာပြုရမည်။
(ခ)နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူအဖြစ် ဗဟိုအဖွဲ့က သတ်မှတ်သော နိုင်ငံခြားသား မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ကိုင်ဆောင်သူသည် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၏ သတ်မှတ်သည့်အဖွဲ့အစည်းရှေ့သို့ကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီး နိုင်ငံခြားသားအဖြစ်ကို စွန့်လွှတ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်၏ သစ္စာကိုခံယူကြောင်း၊ နိုင်ငံတော် ၏ ဥပဒေများကို ရိုသေလိုက်နာမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ သတ်မှတ်ထားသော တာဝန်နှင့် အခွင့်အရေးများကို သိရှိကြောင်း စာဖြင့်ရေးသား၍ ကတိသစ္စာပြုရမည်။
(၄၇)နိုင်ငံသားပြုခွင့်လက်မှတ်တွင် လျှောက်လွှာ၌ ဖော်ပြထားသော သားသမီး၏ အမည်ကို ဗဟိုအဖွဲ့က ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ အမည် ထည့်သွင်းပေးခြင်းခံရသော သားသမီးသည် နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူ ဖြစ်သည်။
(၄၈)ပုဒ်မ ၄၇ အရ အမည်ထည့်သွင်းပေးခြင်း ခံရသော သားသမီးသည် အသက် တစ်ဆယ့်ရှစ်နှစ် ပြည့်ပြီးသူဖြစ်ပါက မိဘနှင့်အတူ ပုဒ်မ ၄၆၊ ပုဒ်မခွဲ (က) ပါအတိုင်း ကတိသစ္စာပြုရမည်။
(၄၉)(က)ပုဒ်မ ၄၇ အရ အမည် ထည့်သွင်းပေးခြင်း ခံရသော သားသမီးသည် အသက်တစ်ဆယ့်ရှစ်နှစ် မပြည့်သေးပါက အသက်ပြည့်သည့်နေ့မှစ၍ တစ်နှစ်အတွင်း ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၏ သတ်မှတ်သည့် အဖွဲ့အစည်းရှေ့သို့ ကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီး ပုဒ်မ ၄၆၊ ပုဒ်မခွဲ (က) ပါအတိုင်း ကတိသစ္စာပြုရမည်။
(ခ)ပုဒ်မခွဲ (က) ပါအတိုင်း လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်သူသည် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၏ သတ်မှတ်သည့် အဖွဲ့အစည်းသို့ တစ်နှစ်လျှင် ကျပ်ငါးဆယ်ကျစီ ဒဏ်ငွေကို ပေးဆောင်စေရမည်။
(၅၀)တစ်နှစ်အတွင်း ကတိသစ္စာ မပြုနိုင်ပါက ခိုင်လုံသောအကြောင်းပြ၍ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၏ သတ်မှတ်သည့် အဖွဲ့အစည်းများမှတစ်ဆင့် ဗဟိုအဖွဲ့သို့လျှောက်ထားရမည်။ ခိုင်လုံသောအကြောင်းမရှိပဲ အသက် နှစ်ဆယ်နှစ်နှစ်ပြည့်သည့်နေ့မှ ကျော်လွန်လျှင် နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူအဖြစ် ဆုံးရှုံးသည်။
(၅၁)(က)နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူ မိဘနှစ်ပါးလုံးသည် နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူအဖြစ်ကို ဆုံးရှုံးလျှင် ထိုသူတို့၏ နိုင်ငံသားပြုခွင်လက်မှတ်တွင် ပါဝင်သော အသက် တစ်ဆယ့်ရှစ်နှစ်မပြည့်သေးသည့် သားသမီးနှင့် အသက်တစ်ဆယ်ရှစ်နှစ် ပြည့်ပြီး ကတိသစ္စာ မပြုရသေးသော သားသမီးသည် နိုင်ငံသားပြုခွင့် ရသူအဖြစ် မှ ရပ်စဲသည်။
(ခ)နိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံခြားသား မိဘနှစ်ပါးအနက် နိုင်ငံသားအမိ သို့မဟုတ် အဘသည် နိုင်ငံသားအဖြစ်ကို ဆုံးရှုံးလျှင် ထိုသူကိုင်ဆောင်သောလက်မှတ်တွင် ပါဝင်သည့် အသက် တစ်ဆယ့်ရှစ်နှစ် မပြည့်သေးသော သားသမီးနှင့် အသက် တစ်ဆယ်ရှစ်နှစ်ပြည့်ပြီး ကတိသစ္စာ မပြုရသေးသော သားသမီးသည် နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူအဖြစ်မှ ရပ်စဲသည်။
(ဂ)ဧည့်နိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံခြားသားမိဘနှစ်ပါးအနက် ဧည့်နိုင်ငံသားအမိ သို့မဟုတ် အဘသည် ဧည့်နိုင်ငံသား အဖြစ်ကို ဆုံးရှုံးလျှင် ထိုသူ ကိုင်ဆောင်သောလက်မှတ်တွင် ပါဝင်သည့် အသက် တစ်ဆယ့်ရှစ်နှစ် မပြည့်သေးသော သားသမီးနှင့် အသက်တစ်ဆယ့်ရှစ်နှစ်ပြည့်ပြီး ကတိသစ္စာ မပြုရသေး သော သားသမီးသည် နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူ အဖြစ်မှ ရပ်စဲသည်။
(ဃ)နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူနှင့် နိုင်ငံခြားသား မိဘနှစ်ပါးအနက် နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူ အမိ သို့မဟုတ် အဘသည် နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူအဖြစ်ကို ဆုံးရှုံးလျှင် ထိုသူကိုင်ဆောင်သောလက်မှတ်တွင် ပါဝင်သည့် အသက် တစ်ဆယ့်ရှစ်နှစ် မပြည့်သေးသော သားသမီးနှင့် အသက်တစ်ဆယ့်ရှစ်နှစ်ပြည့်ပြီး ကတိသစ္စာ မပြုရသေးသော သားသမီးသည် နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူ အဖြစ်မှ ရပ်စဲသည်။
(၅၂)နိုင်ငံသား သို့မဟုတ် ဧည့်နိုင်ငံသား သို့မဟုတ် နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူနှင့် အိမ်ထောင်ကျခဲ့သော ဤဥပဒေ အာဏာတည်သည့်နေ့မတိုင်မီက နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ကိုင်ဆောင်သူသည် နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရရန် လျှောက်ထားပြီး နိုင်ငံသားပြုခွင့် မရမီ ယင်း၏ဇနီး သို့မဟုတ် ခင်ပွန်း
သေဆုံးလျှင်ဖြစ်စေ၊ ကွာရှင်းလျှင်ဖြစ်စေ၊ ထိုသူ၏ နိုင်ငံသားပြုခွင့် လျှောက်ထားခြင်းသည် ပျက်ပြယ်သည်။
(၅၃)နိုင်ငံသားပြုခွင့် ရသူတစ်ဦးသည် --
(က)နိုင်ငံတော်၏ ဥပဒေများကို ရိုသေလိုက်နာရမည်။
(ခ)နိုင်ငံတော်၏ ဥပဒေပါ တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ရမည်။
(ဂ)နိုင်ငံတော်ကောင်စီက အခါအားလျှော်စွာ သတ်မှတ်သော အခွင့်အရေးများမှအပ နိုင်ငံတော်၏ ဥပဒေပါ နိုင်ငံသား အခွင့်အရေးများကို ခံစားခွင့်ရှိသည်။
(၅၄)နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူ တစ်ဦးသည် အခြားနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုပါ ခံယူခွင့် မရှိစေရ။
(၅၅)နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူ တစ်ဦးသည် နိုင်ငံတော်ပါဝင်နေသော စက်မက်ကာလအတွင်း နိုင်ငံသားပြုခွင့် ရသူအဖြစ်ကို စွန့်လွှတ်ခွင့် မရှိစေရ။
(၅၆)နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူတစ်ဦးသည် နိုင်ငံသား သို့မဟုတ် ဧည့်နိုင်ငံသားနှင့် အ်ိမ်ထောင်ပြုကာမျှဖြင့် နိုင်ငံသား သို့မဟုတ် ဧည့်နိုင်ငံသားအဖြစ် အလိုအလျောက် မရရှိစေရ။
(၅၇)နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူတစ်ဦးသည် နိုင်ငံတော်မှ အပြီးအပိုင် ထွက်ခွာလျှင်ဖြစ်စေ၊ အခြားနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုခံယူလျှင် သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင်လျှင်ဖြစ်စေ၊ အခြားနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် သို့မဟုတ် အလားတူလက်မှတ်ကို ထုတ်ယူလျှင်ဖြစ်စေ နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူအဖြစ်မှ ရပ်စဲသည်။
(၅၈)နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူ တစ်ဦးသည် အောက်ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက် တစ်ရပ်ရပ်နှင့် ငြိစွန်းလျှင် နိုင်ငံသားပြုခွင့် ရသူ အဖြစ်မှ ဗဟိုအဖွဲ့က ရုပ်သိမ်းနိုင်သည် --
(က)နိုင်ငံတော်ပါဝင်နေသော စစ်မက်ကာလအတွင်း ရန်သူနိုင်ငံများနှင့်ဖြစ်စေ၊ ရန်သူနိုင်ငံကို အထောက် အကူပြုသည့် နိုင်ငံများနှင့်ဖြစ်စေ၊ ထိုနိုင်ငံများ၏ နိုင်ငံသားများ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဖြစ်စေ၊ ကုန်သွယ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဆက်သွယ်ခြင်း သို့မဟုတ် ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်း တစ်ရပ်ရပ်ကို အားပေးကူညီခြင်း၊
(ခ)နိုင်ငံတော်ကို ဆန့်ကျင်နေသည့် အဖွဲ့အစည်းနှင့်ဖြစ်စေ၊ ထိုအဖွဲ့အစည်း၏ အဖွဲ့ဝင်နှင့်ဖြစ်စေ၊ ကုန်သွယ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဆက်သွယ်ခြင်း သို့မဟုတ် ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်း တစ်ရပ်ရပ်ကို အားပေးကူညီခြင်း၊
(ဂ)နိုင်ငံတော်၏ အချုပ်အချာအာဏာနှင့် နိုင်ငံတော်၏ လုံခြုံရေးကိုဖြစ်စေ၊ အများပြည်သူတို့၏ အေးချမ်း သာယာရေးကိုဖြစ်စေ၊ ထိပါးစေသည့် အန္တရာယ်တစ်ခုခုကို ပြုလုပ်နေသည်၊ ပြုလုပ်တော့မည်ဟု ယုံကြည်လောက် သော အကြောင်းရှိခြင်း၊
(ဃ)နိုင်ငံတော်ကို အကြည်ညိုမဲ့ကြောင်း သို့မဟုတ် သစ္စာမဲ့ကြောင်းကို ကိုယ်အမူအရာဖြင့်ဖြစ်စေ၊ နှုတ်အမူအရာဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အခြားနည်းဖြင့်ဖြစ်စေ ပြသခြင်း၊
(င)နိုင်ငံတော်၏ လျှို့ဝှက်ကိစ္စ တစ်ရပ်ရပ်ကို သူတစ်ဦးကိုဖြစ်စေ၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုကိုဖြစ်စေ၊ အခြားနိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံကိုဖြစ်စေ၊ အခြားနိုင်ငံများကိုဖြစ်စေ၊ သတင်းပေးခြင်း၊ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းကို အားပေး ကူညီခြင်း၊
(စ)အကျင့်စာရိတ္တ ပျက်ပြားခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ပြစ်မှုတစ်ခုခုကို ကျူးလွန်သောကြောင့် အနည်းဆုံး ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ် သို့မဟုတ် အနည်းဆုံးငွေဒဏ် ကျပ်တစ်ထောင် အပြစ်ပေးခံရခြင်း၊
(၅၉)နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူ တစ်ဦးသည် မဟုတ်မမှန်ဖော်ပြခြင်း သို့မဟုတ် ဖုံးကွယ်ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူ အဖြစ်ကို ရရှိပါက နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူအဖြစ်မှ ရုပ်သိမ်းခြင်း ခံရမည့်အပြင် ထောင်ဒဏ်တစ်ဆယ်နှစ်နှင့် ငွေဒဏ်ကျပ် ငါးသောင်းကိုလည်း ကျခံစေရမည်။
(၆၀)နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူတစ်ဦးသည် မသမာသောနည်းလမ်းဖြင့် နိုင်ငံသားလက်မှတ် သို့မဟုတ် ဧည့်နိုင်ငံသားလက်မှတ် သို့မဟုတ် နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူလက်မှတ်ကို သူတစ်ဦးရရှိရန် အားပေးကူညီလျှင် နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူအဖြစ်မှ ရုပ်သိမ်းခြင်းခံရမည့်အပြင် ထောင်ဒဏ် ခုနစ်နှစ်နှင့် ငွေဒဏ် ကျပ်တစ်သောင်း ကို လည်း ကျခံရစေရမည်။
(၆၁)နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူတစ်ဦးသည် ပုဒ်မ ၅၉၊ ပုဒ်မ ၆၀ အရ သူတစ်ဦးကျူးလွန်သော အမှုကိစ္စကို ကိုယ်တိုင်သိရှိလျှင်ဖြစ်စေ၊ ကိုယ်တိုင်ပါဝင် ကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့လျှင်ဖြစ်စေ၊ ဤဥပဒေ အာဏာတည် သည့်နေ့မှစ၍ တစ်နှစ်အတွင်း သို့မဟုတ် ကျူးလွန်ခဲ့သည့် နေ့မှစ၍ တစ်နှစ်အတွင်း ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဌာန၏ သတ်မှတ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ၌ ဖော်ထုတ်ဝန်ခံပါက ဤအမှုကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်းသော ပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်မှ လွတ်ငြိမ်းခွင့် ရရှိစေရမည်။
(၆၂)(က)နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူအဖြစ်မှ ရပ်စဲခံရသူ သို့မဟုတ် ရုပ်သိမ်းခံရသူ၏ နိုင်ငံသားပြုခွင့် လက်မှတ် ကို ပယ်ဖျက်ရမည်။ ထိုသို့ ပယ်ဖျက်ထားသော လက်မှတ်ကို ကိုင်ဆောင်သူသည် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဌာန၏ သတ်မှတ်သည့်နည်းလမ်းနှင့်အညီ ပြန်လည်အပ်နှံရမည်။
(ခ)ပယ်ဖျက်ထားသော နိုင်ငံသားပြုခွင့် လက်မှတ်ကို ပြန်လည်အပ်နှံရန် ပျက်ကွက်လျှင်ဖြစ်စေ၊ ဆက်လက် အသုံးပြုလျှင်ဖြစ်စေ၊ သူတစ်ဦးအား မသမာသောနည်းလမ်းဖြင့် လွှဲပြောင်းပေးအပ်လျှင်ဖြစ်စေ၊ ထောင်ဒဏ်
တစ်ဆယ်နှစ်နှင့် ငွေဒဏ်ကျပ်နှစ်သောင်းကို ကျခံစေရမည်။
(ဂ)မည်သူမဆို ပယ်ဖျက်ထားသော နိုင်ငံသားပြုခွင့်လက်မှတ်ကိုဖြစ်စေ၊ သေဆုံးသူ နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူ၏ လက်မှတ်ကိုဖြစ်စေ ကိုင်ဆောင်အသုံးပြုလျှင် ထောင်ဒဏ် တစ်ဆယ်နှစ်နှင့် ငွေဒဏ်ကျပ် နှစ်သောင်းကို ကျခံစေရမည်။
(၆၃)မည်သူမဆို နိုင်ငံသားပြုခွင့် လက်မှတ်အတု ပြုလုပ်လျှင်ဖြစ်စေ၊ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန် အားပေး ကူညီလျှင် ဖြစ်စေ၊ ထောင်ဒဏ်တစ်ဆယ့် ငါးနှစ်နှင့် ငွေဒဏ် ကျပ်ငါးသောင်းကို ကျခံစေရမည်။
(၆၄)နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူအဖြစ်မှ ရပ်စဲခံရသူ သို့မဟုတ် ရုပ်သိမ်းခံရသူသည် နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူအဖြစ်ကို ပြန်လည်လျှောက်ထားခွင့် မရှိစေရ။
ရခိုင်​ပြည်​ရှိမူစလင်​များသည်​ ၁၉၃၆ ခု မှ ၂၀၁၀ ခုနှစ်​ထိ မြန်​မာနိုင်​ငံ တွင်​ပြုလုပ်​သမျှ ​ရွေးကောက်​ပွဲတွင်​ မဲထည့်​ခွင့်​၊ ​ရွေးချယ်​ခွင့်​ရှိပြီး၊ ၂၀၁၅ တွင်​ ပြုလုပ်​​သော​ရွေး​ကောက်​ပွဲတွင်​ မဲထည့်​ခွင့်​ ​ရွေး​ကောက်​ ခံခွင့်​ကို ဥပ​ဒေ ပြဌာန်းပြီး မဲထည့်​ခွင့်​၊ ​ရွေးချယ်​ခံခွင့်​၊ အခွင့်​အ​ရေးကို ပိတ်​ပင်​ခဲ့သည်​။
1936 / 1946 elected members ​ကိုယ်​စားလှယ်​များ
1951 / 1956 / 1960 elected members ကိုယ်​စားလှယ်​များ
1978 / 1990 / 2010 elected members ကိုယ်​စားလှယ်​များ
ROHINGYA MEMBERS OF PARLIMEN OF MYANMAR (BURMA)
Year. Post. Name.
1936. M.G.C. U Ganimarken.Buthidaung&Maugdaw.
1946. M.L.C. U Phon khen. Akayb.
M.L.C. U Sultan Ahmad. Maugdaw.
M.L.C. I Abdulgaffar. Buthidaung
1951. M.P. U Abdulgffar. Buthidaung.
M.P. U Abulbashar. Buthidaung.
M.P. U Sultanahamad. M aungdaw.
M.P. Daw Aye Nyunt. M aungdaw.
1956. M.P. U Ezarmeah. Buthidaung.
M.P. U Sultan Mahmood. Buthidaung.
M.P. U Abul basher.
M.P. U Sultan ahmad. M aungdaw.
M.P. U Abulkair. M aungdaw.
M.P. U Abdul gaffer. Buthidaung.
1960. M.P. U Abulbashar. Buthidaung.
M.P. U sultanmahmood. Buthidaung.
M.P. U Rashid. M aungdaw.
M.P. U M.A. Suntan. Buthidaung.
1974. Dr.A Rahim. M aungdaw.
M.P. U Abulhusain.Buthidaung.
1978. M.P. U Abdul Hai..M aungdaw.
1990. M.P. U Fazal Ahmad. M aungdaw.
M.P. U Chit Lwin. Maungdaw.
M.P. Noor Ahmad. Buthigaung.
M.P. U Amwarul haq. Buthidaung.
M.P. U Shwe Ya. Akyab.
2010. M.P. U Zakor Ahmad. Maungdaw.
M.P. I Zayad Rahman. Maungdaw.
M.P. U Zahingir. Maungdaw.
M.P. U Zahi Dullah. Buthidaung.
M.P. U Bashir Ahmad. Buthidaung.
M.P. U Shwemaung. Buthidaung.
M.P. Dr. Bashir Ahmad. Buthidaung.
ရခိူင်လူငယ်တစ်ဦးမှ မြောက်ဦးခေတ်က ဒင်္ဂါး တစ်ချပ် ဟု ယူဆရသော ငွေသားတစ်ပြား လာရောက်လှူဒါန်းမှုကို လက်ခံရရှိသည်
First Yr. Geography Syllabus ပထဝီဝင် ဘာသာ ရပ်ထဲက ရခိုင်ပြည်ရှိ ရှေးဟောင်း လူမျိုးစု တစ်စု
First Yr. Geography Syllabus existence of Rohingya: တက္က သိုလ် ပထမနှစ် ပ ထ ဝီ ဝင် ဘာ သာ ရပ်၏ စာမျက်နှာ (94) တွင် ရှေးဟောင်းလူမျိုးစု အ ကြောင်း သင် ရိုး တွင် ပြ ဌာန်း ထားသည်။
AD 1629 - !643, Travels of Fray Sebastien Manrique စာအုပ်ထဲက မြောက်ဦးမြိုရှိ ဗလီများ
4 January 1947 -4January 1948, Anniversary of Myanmar's independence
To better understand Myanmar's (Burma's) transition to independence (and soon after, civil war), it's important to remember what else was happening in the world. In early 1948 nearly the entire world was in ferment: * The Soviets were blockading Berlin, bringing the new Cold War to near boiling point. * The US would soon approve its ""Marshall Plan"" to rebuiltawar-destroyed Europe. * The UN's Palestine Mandate was just about to end, leading to the birth of Israel and the first Arab-Israeli War. * The communist revolt against the new Federation of Malaysian was soon to erupt, leading to the ""Malayan Emergency"" and 12 years of guerrilla war. * The First Indochina War was in full swing, with the French fighting the Viet Minh. * Dutch forces were in the middle ofa4 year battle against the new Indonesian republic. And most importantly for Burma: * British India had been just been partitioned into the newly independent Dominions of India and Pakistan. Partition had led to the deaths of hundreds of thousands of people and the first India-Pakistan War over Kashmir. Burma no longer bordered any British possession. * The Chinese civil war would within2years lead toabloody communist victory. And Clement Attlee's reformist Labour government had succeeded Winston Churchill's conservatives, promising change at home and deciding quickly on decolonisation in Asia. By 1946 Burma's usefulness to the UK was over. It was no longerastrategic eastern buffer for British India. And it was clear that its ruined economy would take years if not decades (and lots of money) to recover. Malaysia, Singapore and Hong Kong were key to future profits for UK companies, not Burma. By early 1947 the UK government was looking foraway out of Burma. The Myanmar (Burmese) independence movement helped determine the shape and exact timing of independence but there was little doubt the British would leave sooner rather than later. On4January 1948, the British quit Burma for good. For the Burmese it would beabrave leap into the unknown, atatime of global turmoil, and revolution (in China) on its doorstep. (Photo of President Sao Shwe Thaik and Sir Hubert Rance at the independence day ceremony and Map of the British Commonwealth in 1948)
Explore more in Independence and Civil War (1945-1951)
ပုံစံရေးသွင်းရန်ညွှန်ကြားချက် စာအုပ်ထဲက လူဦးရေစာရင်း
၁၉၅၈ - ၁၉၆၂ မြန်​မာ့နိုင်​ငံ​ရေး တတိယတွဲ စာမျက်​နှာ (၂၃၀) ထဲက ကောက်နုတ်ချက်
Unesco မှ Ethnologue စာအုပ်ထဲက ဘာသာစကား ကောက်နုတ်ချက်
UNESCO နဲ့ SIL အဖွဲ့ကြီး တို့ရဲ့ သုတေသနပြု တွေ့ရှိချက် များအရ ဘာသာ စကားပြော ပင်မ မျိုးနွယ် စုကြီး (၁၄၇) မျိုး ခွဲခြားပြထားခြင်း
Census of India, 1911 Volume IX Burma PART 1, Report
ဒေသန္တရအမိန့် (၈) ခု ပယ်ဖျက်ခြင်း
နှစ် (၇၀) မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့အခမ်းအနား